Zọ akụkụ Manufacturers & Suppliers - China zọ akụkụ Factory
Zọ Parts 4
Ngwa nke stamping akụkụ 1. Ọdụdọ akụkụ zọ osisi. Kinddị ụlọ ọrụ a bụ ụlọ ọrụ ọhụrụ, nke na-etolite na mmepe nke ngwa eletriki. Theselọ ọrụ a na-elekwasị anya na ndịda. 2. Autgbọala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ stampụ. Emebere ya karia igba ọkpọ na ịkwa aji. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a bụ akụkụ ụlọ ọrụ ọkọlọtọ na ụfọdụ osisi stampụ ndị kwụụrụ onwe ha. Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ ụlọ nrụpụta gburugburu ụfọdụ ihe eji arụ ụgbọ ala ...
Zọ Parts 5
Zọ Parts 6
Zọ Parts 7
Stamping Parts miri ịbịaru 8
Zọ Parts 10
Zọ Parts 9
Zọ Parts 11